AppImage ဂိမ်းများ - ဘယ်နေရာကိုများများ AppImage ဂိမ်းများရနိုင်မလဲ။ | Linux မှ
ငါတို့တွေ့ခဲ့သည့်အတိုင်း, ငါတို့ယခင် entry ကိုအတွက်ကိုခေါ် "Counter Strike 1.6: ဤ FPS ကို GNU / Linux တွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း!", အလုပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းပရိုဂရမ်ကို install လုပ်ပါ ".AppImage format" ထဲမှာ ပုံမှန်အားဖြင့် အခြားရွေးချယ်စရာ (အဖြေ) အများကြီးပိုအသုံးဝင်သောနှင့်အခြားသူများထက်လက်တွေ့ကျတဲ့, ငါတို့၏ repositories ကိုအတွက်ပုံမှန်အားဖြင့်မပါဝင်သည့်အခါ GNU / Linux Distros.
ထို့ကြောင့်၊ ဖော်ပြထားသောထည့်သွင်းမှုတွင်ဖိုင်တစ်ခုကိုရယူပြီးအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုမှတ်ချက်ချခဲ့သည် ".AppImage format" မှ ကြေးနန်းချန်နယ်။ သော်လည်း, ကြေးနန်းလိုင်းများနှင့်အဖွဲ့များ ၎င်းတို့သည်များသောအားဖြင့် application နှင့် game file များကိုပြုပြင်ခြင်းတွင်အလွန်ကောင်းသည်။ အကောင်းဆုံးအချက်မှာ၊ မည်သည့် ၀ က်ဘ်ဆိုက်သည်တူညီသောလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူတူဖြစ်သည်၊ « .AppImage format »ရှိဂိမ်းများ.
စူးစမ်းလေ့လာရန်စိတ်ဝင်စားသူများအဘို့မှတ်ချက်ပေးထုတ်ဝေဟုခေါ်တွင် "Counter Strike 1.6: ဤ FPS ကို GNU / Linux တွင်ကစားရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း!" အောက်ဖော်ပြပါလင့်များကိုအသုံးပြုပြီးသင်နှင့်အခြားဆက်စပ်သူများကိုစူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည် -
"သေချာပါတယ်၊ "Counter Strike 1.6" ၎င်းသည်အခမဲ့မဟုတ်သလိုပွင့်လင်းမှုလည်းမရှိပါ၊ သို့သော်ယနေ့မိတ်ဆွေများ၊ အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောနှစ်များကကစားသူများနှင့်ကစားသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်မျှဝေခံစားခြင်းခဏအတွက်အခမဲ့နှင့်ပွင့်လင်းသောဂိမ်းကိုအသုံးမပြုဘဲများစွာလျစ်လျူရှုထားနိုင်သည်။ ငါတို့ပြီးခဲ့သည့်အခြားဆက်စပ်စာပမြေားတှငျပွောခဲ့ကြသကဲ့သို့ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့။"
1 AppImage ဂိမ်းများ - AppImage ဖိုင်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူပါ
1.1 ဘယ်ဂိမ်း .AppImage ဖိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လက်ရှိတည်ရှိသနည်း။
1.1.3 Linux ဂိမ်း Portal
1.1.4 Linux-Apps.com (ဂိမ်း AppImage)
AppImage ဂိမ်းများ - AppImage ဖိုင်ကိုဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုရယူပါ
ဘယ်ဂိမ်း .AppImage ဖိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်သည်လက်ရှိတည်ရှိသနည်း။
ပြီးရင်ကြေငြာမယ် စိတ်ဝင်စားဖွယ်၊ အသုံး ၀ င်။ လက်တွေ့ကျသော ၀ ဘ်ဆိုဒ် ၄ ခု မည်သူမဆိုမည်သည့်ပရိုဂရမ်အမျိုးအစားကိုမဆိုအလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်သည်၊ download လုပ်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည် juegosထဲမှာ format « .AppImage format »:
ဒီဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ .AppImage format နဲ့ပရိုဂရမ် ၁၀၀ ကျော်ပါတဲ့ကက်တလောက်ပါဝင်ပြီးဆက်ပြီးတိုးတက်နေပါတယ်။ AppImages ပရိုဂရမ်များသည်မည်သည့် Linux ဖြန့်ချိမှုတွင်မဆိုဒေါင်းလုပ် လုပ်၍ ရနိုင်သည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်လွယ်ကူသောပေါင်းစပ်မှုအတွက်၎င်းကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ အသုံးပြုနိုင်သည် နေပြည်တော်.
ဤ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သည် AppImage အထုပ်ကိုဖန်တီးခဲ့သောအဖွဲ့အစည်း၏အက်ပလီကေးရှင်းဖြစ်သည်။ AppImage.org.
Linux ဂိမ်း Portal
ဤ ၀ ဘ်ဆိုဒ်သည် Linux ဂိမ်းများကိုမည်သည့် Linux စနစ်တွင်မဆိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ ၎င်းသည် AppImage အထုပ်ပုံစံနှင့်အချို့သောမှော်အတတ်ကိုအသုံးပြုသည်။
Linux-Apps.com (ဂိမ်း AppImage)
ဒီ website မှာအပိုင်းရှိတယ် အားကစားပြိုင်ပွဲအပါအဝင်အများအပြားပုံစံများအတွက် AppImage။ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည် application များကိုထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော Linux ဂိမ်းကြီးများအတွက်တာ ၀ န်ရှိသည် အိတ်ဆောင်နှင့် Self- ပါရှိသော packages များ မည်သည့် Linux စနစ်တွင်မဆိုအလုပ်လုပ်နိုင် (သို့မဟုတ်သင့်သည်) ။ ၎င်းသည် AppImage အထုပ်ပုံစံနှင့်အချို့သောမှော်အတတ်ကိုအသုံးပြုသည်။
ထို့အပြင်၎င်းသည်အခြားပိုကြီး။ ပို၍ လူသိများသောခေါ်ဆိုမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည် အပိုတွေပါအလှည့်၌, ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Opendesktop.org။ Pling ဆိုသည်မှာ Store ကဏ္ cre ဖြစ်သည်။ တီထွင်သူများသည်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များနှင့်အခမဲ့အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဝေနိုင်ပြီးထုတ်ကုန်တစ်ခုဒေါင်းလုပ်ဆွဲသည့်အခါ (သို့) သတင်းအချက်အလက်ကိုကြည့်ရှုသည့်အခါတိုင်းလျော်ကြေးငွေအနည်းငယ်ရနိုင်သည်။ ကဏ္ each တစ်ခုစီအတွက်ရရှိနိုင်သောအလှူငွေပမာဏကိုကန့်သတ်နိုင်သည်။
တစ်စုံတစ် ဦး ကအခြားသူကိုသိလျှင် စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးအသုံးဝင်သော၊ တူညီသောရည်မှန်းချက်သို့မဟုတ်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဤထုတ်ဝေမှု၏မှတ်ချက်များတွင်၎င်းအမည်ကိုချန်ထားသည်။
ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် "အကူအညီအနည်းငယ်သာပို့စ်" ဘာအကြောင်းလဲ ကွန်ရက်စာမျက်နှာများ ဂိမ်းများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်တည်ရှိ «formato .AppImage», ဒါ တပ်ဆင်ပြီးကစားပါ အလွယ်တကူငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းနှင့်အစေခံသောသူတို့အား; တစ်ခုလုံးကိုအဘို့ကြီးစွာသောအကျိုးစီးပွားနှင့် utility ကိုဖြစ်ပါတယ် «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» နှင့်၏အံ့သြစရာ, အလွန်ကြီးမားသောနှင့်ကြီးထွားလာ၏ applications များ၏ဂေဟစနစ်၏ပျံ့နှံ့ဖို့ကြီးစွာသောအလှူငွေ၏ «GNU/Linux».
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » AppImage ဂိမ်းများ - ဘယ်နေရာကိုများများ AppImage ဂိမ်းများရနိုင်မလဲ။
Tim Berners-Lee သည် www ၏မူရင်း source code ကိုလေလံတင်သည်